सामाजिक संस्थाको नेता बन्नेहरुको उद्द्यस्य के हो, किन गोलमाल हुन्छ संस्थाको कोषमा ? - चारदिशा
November 28, 2020 चारदिशा बिबिध
गैर आबासिय नेपाली संघले केन्द्र देखि राष्ट्रिय समन्वय परिषदसम्म आफ्नो साख बचाउन संघर्ष गरी रहेको छ । संस्थाले आदर्श मानेका र अबलम्बन गरेका बिषयका बिच धेरै ठुलो खाडल भएको कारण संस्थाको आधोगतिको यात्रा जारी छ । आमुल र क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न नसके प्रबासमा रहेका लाखौं नेपालीहरुको साझा संस्था केही सिमित ब्यक्तीहरुले आफ्नो फाईदाको प्रयोग गर्ने औजार मात्र रहने पक्का छ ।
एनआरएनहरुको बर्षौको सपना यसको मुल घर ( केन्द्रीय कार्यालय ) जग्गा बिबादले अलपत्र बनेको छ र करोडौको लगानी भगवान भरोशामा अड्किएको छ । निकै ताम्झाम साथ सुरु गरिएको लाप्राक नमुना बस्ती पनि स्थानीयले चर्चिन इच्छा नदेखाएको खबर छ भने संस्थाको करोडौ रकम लगानी भैसकेको छ । त्यसको हिसाब किताबको पारदर्शिताको बारेमा प्रश्न उठे पनि चित्त बुझ्दो जबाफ पंजिक्रित सदस्यले पाउन सकेका छैनन । केन्द्रीय कार्यालयको सन्चालनमा गडबडीका दर्जन प्रमाणहरु छन ।
एनआरएनए भनेको पैसावाला नेपालीहरुको संगठन हो भन्ने छबी नेपालमा बनेको छ तर सानो भन्दा सानो परियोजना बनाउन पनि प्रबासमा पसिना बेच्ने नेपालीहरु सँग हात फैलाएर माग्ने चलन छ, तर जो सँग मागियो उसलाई पारदर्शी विवरण दिनुको साटो पत्रकारहरुले अौपचारिक तवरले माग्दा पनि पाउने गरेका छैनन । भनाई र गराइको भिन्नताले धमिलो भएको संस्थाको छबि नेत्रित्वगर्नेहरुको आर्थीक अपचलनले झन दयनीय बनाएको छ ।
एनसीसीहरुको अबस्था झन भद्रगोल छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । बेलायतमा भएको घोटाला अदालतको ढोका सम्म पुगेको छ भने जर्मनीमा ”काले काले मिलेर खाउ भाले” भने झै पदको लागि गरिएको सहमतिको भागबन्डामा भाग अनुसारको शुल्क नतिरेर अहिले केन्द्रमा उजुरी परेको छ ।
भोली आईतवार एनआरएनए बेल्जियमले साधारण सभा गर्दैछ । यता पनि सहमतिका लागि भाग पुर्‍याउन बिधान भन्दा बाहिर गएर नियुक्त गरिएका उपाध्यक्ष लगायतका पदको बैधानिकता पुरा गर्नु पर्ने, कोरोना त्रसित भएको समुदायलाई शान्तोना र सहयोगका लागि भरोशा दिनु पर्ने र केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने करिब पाँच हजार डलरको हिसाब पंजिक्रित सद्स्यलाई दिनु पर्ने लगायतका बिषयमा जानकारी दिन जरुरी छ ।
निबर्तमान कोषाध्यक्षले बल्ल बल्ल बुझाएको पुरानो हिसाब र पूर्व अध्यक्ष र आईसीसी सदस्यले केन्द्रमा बुझाउने भनेर लगेको पैसा केन्द्रमा पनि नबुझाएको र संस्थाको खातामा पनि नभएको जानकारी पाइएको छ । त्यसको ब्याज कसले खाई रहेको छ ? एकातिर संस्था ऋणमा देखिने, सदस्यहरुसँग उठाएको पैसा ब्यक्तिबिशेषले बर्षौ सम्म ब्यक्तिगत फाईदाका लागि प्रयोग गर्नु अपराध हो कि होइन ?
गत साल इटलीमा भएको युरोपियन बैठकमा एनआरएनए बेल्जियमले सहयोग बोलेको एक हजार युरो संस्थाको हिसाबबाट काटिएको छ ( तस्बिर हेर्नु होस ) तर एक बर्ष सम्म एनआरएनए इटालीले त्यो पैसा पाएको छैन । यसको जिम्मेवार को हो र किन पारदर्शी भएर हिसाब राखिदैन ?
समाजिक संस्थाको नेत्रित्वमा जानेहरुले सार्वजनिक सम्पत्तीको बितरण र ब्यबस्थापन गर्न बिधानमा गरिएको ब्यबस्थालाई लत्याएर मनोमानी गर्नुलाई भ्रस्टाचार् मानिन्छ । एनआरएनए भित्रको भ्रस्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न बिधी र पद्धतिको अनुशरण गराउन सकिएन भने संस्था डुब्ने दिन गनेर बसे हुन्छ ।
सधैं चुनाव अगाडि जबर्जस्ती ब्यक्तिबिशेषलाई नेता बनाउन बनाएका सदस्यहरुको सदस्यता शुल्कमा गडबडी किन गरिन्छ ? बेल्जियमको अधिबशन ताका बनाएका २७०० बढी सदस्यहरु घटेर एक महिना पछी केन्द्रमा २५०० मात्र सदस्य कसरी भए ? करिब् दुई सय सदस्यको पैसा केन्द्रलाई ठग्न गरिएको ठगीको बारेमा बेल्जियमका पंजिक्रित सदस्यले जबाफको आशा गरेका छन । बारम्बार हुने यस्ता हर्कतले संस्था कमजोर हुने हुँदा स्थाईरुपमा यसको समाधान निकाल्न पनि साधारण सभाले निर्णय गर्नु पर्छ ।
एनआरएनए बेल्जियमको साधारण सभाका सभासदहरुले संस्थाको आगामी कार्ययोजना र बिगतमा संस्थाको नाममा भए गरेका कृयाकलापको बैधानिक कसीमा पास् भएका विवरणको जानकारी पाउनु पर्छ ।